Ziyini Izinzuzo ne-ROI ekusetshenzisweni Kwenjini Yokucinga? | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 25, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Njengoba ngangibukeza izindatshana ezindala engangizibhale ekusebenzeni kwenjini yokusesha; Ngithole ukuthi manje bekungaphezu kweminyaka eyishumi bengilokhu ngihlinzeka ngemikhombandlela. Ukusebenziseka kahle kwezinjini zokusesha kukhuphuke kwafinyelela ezingeni eliphezulu eminyakeni embalwa edlule, imboni eyizigidigidi eyakhuphuka kodwa yawa emseni. Ngenkathi abeluleki be-SEO bekuyo yonke indawo, abaningi babehola amaklayenti abo ngomgwaqo osolisayo lapho babedlala khona injini yokusesha kunokuyisebenzisa ngempumelelo.
Ngaze ngabhala nendatshana ejwayelekile, yokuchofoza, ukuthi I-SEO ibifile okwethusa labo abasembonini yami. Kwakungekhona ukuthi ngangicabanga ukuthi izinjini zokusesha zifile, beziqhubeka nokwanda ngokubaluleka kanye nomthelela kumasu wokuthengisa wedijithali ezinkampani. Kungukuthi imboni ibifile, ilahlekile. Bayeka ukugxila kwezokumaketha, kunalokho, bagxila kuma-algorithms futhi bazama ukukopela indlela yabo eya phezulu.
Nsuku zonke, ngithola izicelo zokucela, ukuncenga, noma ngisho nokufuna ukukhokhela ama-backlinks. Kuyasangana ngoba kukhombisa ukungabi nhlonipho ngokuphelele emphakathini engiwusebenzele ukwakha inani nokwethembana nawo kule minyaka eyishumi edlule. Angizukubeka lokho engcupheni yokukleliswa kwanoma ngubani.
Lokho akusho ukuthi angikhathazeki ngokugcina isiza sami senzelwe izinjini zokusesha noma ezamakhasimende ami. Ukwenza kahle kwezinjini zokusesha kuyaqhubeka nokuba yisisekelo sayo yonke imizamo yethu namakhasimende ethu, amakhulu namancane.
UHarris Myers usungule le infographic, I-SEO: Kungani Ibhizinisi Lakho Liyidinga MANJE?, kufaka phakathi izizathu eziyisithupha zokuthi kungani wonke amabhizinisi kufanele abe necebo lokusesha le-organic.
Okuhlangenwe nakho okuku-inthanethi kuqala ngokuseshwa - 93% wabathengi banamuhla basebenzisa injini yokusesha ukubheka imikhiqizo nezinsizakalo
I-SEO ibiza kakhulu - Abathengisi abangama-82% babona i-SEO isebenza kangcono, kuthi ama-42% abone ukwanda okukhulu
I-SEO ikhiqiza ithrafikhi ephezulu namazinga aphezulu wokuguqulwa - Abantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezi-3 basesha i-Intanethi nsuku zonke ngamagama angukhiye abashayela ukusesha okunenhloso, okuhlosiwe okuhlosiwe.
I-SEO yinto ejwayelekile emncintiswaneni namuhla - Usezingeni akusona nje isibonisi samandla we-comapny's SEO, kuyinkomba yegunya lakho lonke le-comapny ngaphakathi kwemboni yakho.
I-SEO inakekela imakethe yeselula - Ama-50% osesho lwasendaweni aholela ekuvakasheni esitolo
I-SEO ishintsha njalo kanjalo namathuba ayo - Izinjini zokusesha ziyaqhubeka nokwenza ngcono ama-algorithms azo futhi zenze ngezifiso futhi zenze imiphumela eyenzelwe ukukhulisa ulwazi lwamakhasimende. I-SEO akuyona into wena do, kudinga ukunakekelwa okuqhubekayo ukuqapha zombili izinguquko zenjini yokusesha nemizamo evela kubaqambi bakho.
Into yokuqala okufanele uyikhumbule mayelana nokubuyiselwa kokutshalwa kwezimali kwe-SEO ukuthi izoshintsha ngokuhamba kwesikhathi. Uma uqhubeka nokwandisa futhi ukhiqiza okuqukethwe okumangazayo, imbuyiselo yotshalomali izokwanda ngokuhamba kwesikhathi. Njengesibonelo, ukhiqiza i-infographic ngegama elincintisana kakhulu futhi utshalomali lungu- $ 10,000 ocwaningweni, ekwakhiweni nasekukhushulweni. Ngenyanga yokuqala, wenza lo mkhankaso bese uthola imikhondo embalwa mhlawumbe nokuguqulwa okukodwa ngenani lenzuzo engu- $ 1,000. I-ROI yakho ibheke phansi.
Kepha umkhankaso kusamele uzuze ukubuya kwawo okuphezulu. Ngenyanga yesibili neyesithathu, i-infographic ifakwa kumawebhusayithi amaningi anegunya eliphezulu futhi ishicilelwa kwabashadikazi. Isikweletu esivelayo sandisa igunya lesiza sakho kusihloko bese uqala ukukala phezulu ngamagama angukhiye amaningi ezinyangeni ezimbalwa ezizayo. Amakhasi we-infographic noma ahlobene noma ama-athikili aqala ukuthola amakhulu emikhombandlela ngokuvalwa okuningi inyanga ngayinye. Manje usubona i-ROI enhle. Leyo ROI ingaqhubeka nokwanda eminyakeni embalwa ezayo.
Sine-infographic eyodwa yeklayenti eqhubeka nokunakwa eminyakeni eyisikhombisa ngemuva kokuyishicilela okokuqala! Ukungasho ukuthi sisebenzise okuqukethwe yizibambiso zokuthengisa nezinye izinhlelo. I-ROI kuleyo infographic manje isezinkulungwaneni!
Tags: izinzuzo ze seoukusesha okuphilayousezingeni lokusesha le-organicseoizinzuzo ze-seoinyoka